Author: JoJojinn Shaktidal
Fayyaa fi Jaalala featured Jaalala. Ammas hedduun namootaa waan jaalala isaanii gidaara manaan wolitti buusu, galaana dhufaa jiru fudhachiisu irraa fagotti uftiksu.
Otuu erga dbugaa ‘join’ wal goonee booda banatte ta’ee gaarii ture. Hundi jaalachuufi jaalatamuu fedha. Kana ta’uu baannaan garuu sammuusaa ‘deactivate’ godheen dhagaafi dinnicha illee akka adda baafachuu hin dandeenyetti ‘offline’ isa taasisa.
Arrabni namaa ‘active’ dha – oduutti ariifata. Qabeenyi biyyattii qisaasamaa jira; Pirojeektiin Shukkaaraa Xaanaa Balas kasaaraa qarshii biliyoona….
Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan Dec 12, All Fayyaa fi Hawaasa Jaalala.
Dhaabbileen dhuunfaa PLC naannoleef gibira akka kaffalan murtaaye. Garuu, utuu garaa hin jabaatin jecha gaaffii koof furmaata kennuun deebii naaf deebifte!
Nagaan akka dursu beeka situ qalbii koo fudhate malee. Jaalalli anaaf haaraa ta’uu baatullee siif haaraadha!
Yaada garaa koo wajjinis si qofatu ‘chat’ gochaa oola. Anarraa kan darbe akka namni kaan dhoksaa kee hin agarre ‘privacy’ kee seenii ‘only him’ kan jedhurra vhugaa.
Dhalli ishee kun isheef waa hedduudha. Kan biraa yoo jettan tarreessa See More. Jiru na qabe fkn Hojji barbaada,Dalaga dalagaa jira,Barachaan jira Sitti dhufuuf hangam turullee walarguun kenya hin oolu!
All Atleetiksii Kubbaa miilaa. Achumaan Saaqqattee Onnee koo seente! Osoo hin heerumin mucaa dhiiraa garatti ishee hafe deesse haadha mucaa taate. Andualem Befikadu Demelce Personal Blog. Mammagaala ija kuulaa Kukkuullee ilkaan anaani Nootoo fii simboo qaban Fuularraa walalaqii Dubarran biyya kootii Kana booda nama ‘follow’ si godhu jaalxla qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Ati umriidhaan baay’ee daa’ima.
Umriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Bareedun ani barbaadu hanga amma hin dhalanne 6. All Aadaa Bashannana Viidiyoo.
Rakkoo Lixa Oromiyaaf falli raayyaa ittisa biyyaati Nov 30, Tarii waa natti gootee ati? Afaan Oromoo website Jaalalz Blog. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Erga jaalalli kee na keessatti ‘account’ banaatee kaasee waa’eedhuma keen yaada.
dhutaa Ani jiruun tiyya simalee hin mi’ooytu. Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa. Email or Phone Password Forgot account?
Akka namni nu gidduu seenee walitti dhufeenya keenya ‘block’ hin goone cimsii of eeggadhu.